किन बढ्छ हिउँदमा मानिसको तौल? – Health Post Nepal
किन बढ्छ हिउँदमा मानिसको तौल?
२०७७ पुष १७ गते १०:१०
गर्मी याममा लगाएको पाइन्ट वा अन्य कपडा हिउँदमा लगाउँदा साँघुरो भएको महसुस गर्नुभएकै होला। विगतमा जस्तै दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको, खानपानको पद्धति समान रहेको तथा जीवनशैलीमा परिवर्तन नआएको भएता पनि जाडो मौसममा तपाईंलाई तौल बढेको महसुस भएको हुनसक्छ।
यदि तपाईंलाई त्यस्तो महसुस भएको छ भने यो तपाईंको भ्रममात्र भने पक्कै होइन। सामान्यतयाः गर्मीको तुलनामा हिउँदमा मानिसको तौल तीनदेखि पाँच किलो बढ्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यस्तो मौसमी तौल वृद्धिलाई समस्याका रूपमा लिइहाल्नु नपरे पनि तौल वृद्धिलाई नियन्त्रणमा लिन भने सकिन्छ। विभिन्न वेबसाइटहरूका अध्ययनमा आयोमेलले जाडोयाममा तौल बढ्नुका पाँच कारण र नियन्त्रण उपायको सूची तयार गरेको छ।
न्यून शारीरिक क्रियाकलाप
हिउँद आगमनसँगै मानिस घरबाहिरको तुलनामा घरभित्र बढी समय बिताउने गर्छन्। अझ मध्यजाडोका दिनमा त उनीहरू ओछ्यानभित्र गुटमुटिएर बस्ने, आगो ताप्ने वा टिभी हेर्नेलगायत क्रियाकलापमा धेरै समय बिताउने गर्दछन्। यस्ता निष्क्रिय क्रियाकलापका समय बढी खर्च हुँदा अन्य समयमा गरिने शारीरिक क्रियाकलापमा कमी आउँछ।
अझ जाडोलाई दोष दिँदै अन्य मौसममा गर्ने गरेको बिहानीको हिँडाइ, घर बाहिरको योग तथा व्यायाम वा शारीरिक अभ्यासलाई पनि यो समयमा बन्द गर्ने गरिन्छ जसले गर्दा मानिसले खानामार्फत आर्जन गरेको क्यालोरी शरीरभित्र सञ्चित भई तौल बढ्ने गर्छ।
तसर्थ, यस्तो निष्क्रियताबाट जोगिन घर वा आफ्नो शयन कक्षमै पनि हल्का व्यायाम वा योगका क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ। बिहान–बेलुका जाडोका कारण बाहिर निस्कन नसक्नेले दिउँसो घाम लागेको समयमा सम्भव भएसम्म शरीर सक्रिय राख्ने क्रियाकलाप गर्न उपयुक्त रहन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने जाडोमा हामी जति निष्क्रिय भएर बस्छौं, त्यत्ति नै जाडो महसुस हुन्छ। तर, यसको विपरीत विभिन्न शारीरिक क्रियाकलाप गरेर हामीले आफ्नो जीउ तताउनुका साथै अनावश्यक बढ्ने तौल पनि नियन्त्रणमा राख्न सक्दछौं।
‘सिजनल अफेक्टिभ डिस्अर्डर’
मानिसको मनोभावनामा मौसमको ठूलो प्रभाव हुन्छ। ठण्डीमा सूर्यको ताप एवं प्रकाश अभावमा धेरै मानिसमा ‘सिजनल अफेक्टिभ डिस्अर्डर’ को समस्या देखिने गरेको पाइन्छ, जुन एकप्रकारको अस्थायी डिप्रेसन हो। यसले मानिसलाई अधिक खाने, अस्वस्थ खाद्यान्न रोज्ने र निष्क्रिय एवं अलग जीवनशैली जिउनेतर्फ उन्मुख गराउँछ, जसको सिधा असर मानिसको तौलमा पर्न जान्छ।
सम्भव भएसम्म न्यानो घाम तापेर यस समस्यालाई केहीमात्रामा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अथवा, यस समस्याले बढी नै प्रभावित भएको अवस्थामा मनोपरामर्श लिनु अति नै उपयुक्त हो।
ज्यान तताउने खुराक
तापक्रममा गिरावट आउँदा हिउँदमा अधिकांशले तातो, बोसोयुक्त, अमिलोपिरो एवं मसालेदार खानाको उपभोगलाई बढाउने गरेको पाइन्छ।
त्यसो त तातो खानाले शरीरको तापक्रम बढाउने र हाम्रो भावना सुधार्ने गरे पनि यस्तो खानाको तौलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। अझ जाडोबाट बच्ने ‘अचुक औषधी’ का रूपमा सेवन गरिने धुमपान, मद्यपान, चिया–कफी तथा मासुजन्य उत्पादनले अल्पकालमा तौल बढाइ दीर्घकालमा मुटुसम्बन्धी समस्या निम्त्याउँछ।
विभिन्नखाले तरकारीको सुपको सेवनले पनि तौललाई बढ्न नदिई जाडोबाट जोगाउने हुनाले यस्तो बानीको विकास गर्नुपर्छ।
स्वस्थ तौल कायम राख्न पर्याप्त पानी उपभोग अनिवार्य हुन्छ। यसबाहेक पानी उपभोग कम हुँदा पनि मानिसलाई छिटो–छिटो भोक लाग्ने हुनाले शरीरले चाँडो–चाँडो खाना खोज्दछ जसले स्वाभाविकरूपमा तौल बढाउँछ।
तसर्थ, जाडोमा एक सामान्य मानिसले दुईदेखि तीन लिटरसम्म पानी पिउनुपर्ने चिकित्सकहरूले जोड दिएका छन्।
डाइबिटिज र थाइराइडजस्ता समस्या भएकाहरूका लागि जाडोयामले थप कठिनाइ ल्याउँछ। मौसम परिवर्तनले शरीरको हर्मोनलाई धेरै प्रभावित गराउँछ भने असन्तुलित हर्मोनका कारण मानिसमा तौल वृद्धि हुने वा तौल घट्ने प्रक्रिया रोकिने जस्ता समस्या देखिन्छन्।
तसर्थ, हर्मोनमा आएको गडबडीका कारण तौलमा पर्ने प्रभाव कम गर्न चिकित्सकसँगको निरन्तर परामर्श एवं स्वास्थ्य जाँचले सहयोग गर्दछ।
तौल र मोटोपना